Fitrandrahana Fatihita – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Tonga nijery ifotony ny fitrandraham-bolamena tao Fatihita CR Tsarasaotra, ny Fitaleavam-paritra miadidy ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS Amoron’i Mania ny 23 Novambra lasa teo. Fidinana ifotony niarahana tamin’ny Ben’ny tanana sy ireo mpitandro ny filaminana ary fifampiresahana nahafahana nandresy lahatra ireo mpitrandraka tonga mirohotra any an-toerana hizotra amin’ny fampitsaharana ny fitrandrahana ka hiverina any amin’ny faritra niaviany avy.
Avy any amin’ireo kaominina manodidina no ankamaroan’ny mpitrandraka izay maro no zaza amam-behivavy. Tamim-pilaminana no nizoran’ny fandresen-dahatra azy ireo manoloana ny valanaretina mananontanona sy ny fanimban’ny mpitrandraka ireo voly manamorona ny reniranon’i Fatihita, ny famotehana ireo hazo sy kesika manodidina ka mampitombo ny tsy fandriampahalemana, ho fisorohana ny mety ho fisian’ny fifandonana eo amin’ny tompontany sy mpitrandraka, sy ny fiantraikan’ny hamaroan’ny mpitrandraka manamorona loatra ny tetezana.
Ankoatra ny fandaminana any an-toerana izay samy andraisan’ireo tomponandraikitra isan-tokony ny tandrifin’adidy mahakasika azy avy, dia isan’ny zava-dehibe ny fitaizana sy fanabeazana ny vahoaka eny ifotony amin’ny trangan-javatra toy izao. Dingana iray mizotra ho amin’ny fandaminana ity tranga manokana no tanteraka fa ny ezaky ny Fitondram-panjakana dia mitohy hatrany amin’ny fanamafisana orina ny tany tan-dalàna.
← Akom-baovao DIRMRS Amoron’i Mania
Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa: Fampahafantarana sy fanentanana ireo mpitrandraka momba ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany, Distrikan’ny Ikalamavony →